Qarax Lala Beegsaday Garoon Kubada Cagta Ah
DAGAALLADA Qarax lala beegsaday garoon kubada cagta ah
Qaraxyada miinooyinka ayaa wakhtigan ah khatarta ugu weyn ee amaanka Muqdisho (Sawir: Yusuf/Radio Ergo)
Muqdisho 28/02/2012 Ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay qarax nooca miinada ah oo ka dhacay garoon lagu ciyaaro kubada cagta ah oo ku yaala xaafada Xararyaale ee degmada Wardhiigleey ee magaalada Muqdisho.
Qaraxa oo shalay galab dhacay ayaa waxa uu sidoo kale ka dhacay 8 kale oo dhamaantood ahaa daawadayaal ciyaarta u soo daawasho tagay xiligaas. Ciyaarta oo ahayd tartan is dhaxgal ah ayaa waxa galab walba ku ciyaarijiray dhalinyaro iskaga yimaada xaafadaha gobiolka Bnaaadir waxaana ciyaartan ay hayd mid kama dambays ah oo uu yaalay koob loogu talagay ciddii badiso.
Mid kamida ciyaartoyda kusugnaa gudaha garoonka xilliga mashaqada dhacaysay ayaa radio Ergo u sheegay “Waxa aan kusugnaa garoonka waxaa laciyaaray ciyaar fiinaala ah waxa dhacay qarac miino oo aad u xooganaa waxa aan kujiray gudaha garoonka waxaan mar qura arkay dad dhaawacyo qabo waxaa geeroyooday hal ruux waxaana dhaawacmay 8 kale” sidaasi waxaa yiri mid kamida ciyaartoyda kusugnaa gudaha garoonka.
Ma,ahan markii ugu horeesay oo qarax uu kadhaco goob ay ku suganyihiin dadka rayadka ah, waxaana bilahan dambe soo badanayay halista goobaha dadka isugu yimaadaan. Abdulkadir Mohamed Abdulle/ MG Faallooyin
Gaalkacyo: Raadadka dagaalka
Qarax waxyeelo weyn u geystay dad rayid ah oo gilgilay Muqdisho Tirada dadkii ku dhintay qaraxii 4ta Oktoobar oo kor u dhaaftay 90.
Dagaallo ka socda Muqdisho iyo dawladda oo sheegtay inay dhul balaaran ka qabsatay Alshabab.
Waa sidee xaaladaha dhabta ah ee xaafadahii dagaladdu ka dhaceen ee Muqdisho.
Xaaladihii ugu dambeeyey ee dagaallada Jubbooyinka
Dhadhaab: Hawlgallada ciidanka Kenya iyo afduubka shaqaalaha gargaarka oo saamayn ku yeeshay nolosha xeryaha qaxootiga.
Pretoria: Ganacsatada Soomaaliyeed ee dhowaan loo geystay boobka oo quud darraynaya inay markale ku noqdaan goobahoodii.
Hanjabaadihii Kenya oo keenay welwelka barakac ku yimaada kumannaan qoys.
Hay'ada maaraynta musiibooyinka oo ka digtay dhibaato ka dhalata duqaymo loo gaysto magaalooyin ku yaal koonfurta wadanka.
Dadaaladda lagu dalbanayo sii daynta shaqaalaha DDG oo xoogaysanaya. Dhibaatada ay dagaalladu ku hayaan dadka dhegoolayaasha ah
Ban Kii-Moon oo mas`uuliyiinta Kenya kala hadlay arrimaha Soomaaliya
Dadka deggan jasiiradaha koonfureed ee Jubbada Hoose oo dagaalladu saameeyeen
Dhaawacyada duqeyntii Hoosungow diyaaradaha dagaalka Kenya ka geysteen oo laga deyrinayo
Dil loo geystay laba sarkaal oo ka tirsan hay`adda dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF.
Dad ka baracay deegaannada Ceelcadde,Faafax dhuun iyo Buusaar ee gobolka Gedo
Dhibaatooyinka walxaha qarxaa u geystaan dadka rayidka ah
Barakac ka taagan Berdaale iyo Baydhabo
Nolosha Baydhabo oo caadi ku soo noqonaysa
Dagaalo ka dhacay Bakool iyo dawladoo sheegtay inay qabsatay Xudur
Waxbarashada ardayda qaxootiga Xaaladihii ugu danbeeyey ee dagaalada ka taagan gobolka Bakool
Dagaal ka dhacay Garbahaarrey oo waxyeello u geyestay cisbitaalka guud ee degmadaasi.
Khatarta walxaha qarxa iyo hubka looga tago wadooyinka Dagaalkii Garbahaarrey oo ay ku xirmeen dhammaan adeegyadii bulshada
Hay'addo samafal oo ka walaacsan barakac ka dhalan kara dagaal lagu qaado wadada Afgooye
Heshiis laga gaaray colaadii Mandheera
Ururada ka shaqeeya miinooyinka oo ka digay halista walxaha qarxa ee Galmudug. Dhimasho iyo dhaawac ka dhashay aano-qabiil oo taagan deg Matabaan
QM oo ku baaqday in la ilaaliyo dadka rayidka ah ee ku sugan wadada Afgooye
Bandowga Beledweyne oo ay dhibaato ku qabaan xoolo dhaqatadu
Qasaarooyin ka dhashay jidgooyo loo dhigay kolonyo gaadiid oo uu la socday madaxweynaha DKMG Soomaaliya.
collaadaha ka taagan qeyba ka mid ah Jubbada hoose
Xaalada Afmadow oo degan iyo meheradii ganacsiga oo weli xiray
Hubka yar yar oo dhibaato ku haya ammaanka Kenya
Khatarta hubka iyo walxaha qarxa ee ka hara dagalada oo sii kordhaysa
Dadka ku nool magaalada Kismaayo oo ka walaacsan diyaarado dagaal
Rayid ku dhintay gantaal lagu weeraray Kismaayo
Khasaaraha duqeynta cirka ee Kismaayo iyo QM oo ka walaacsan
Barakac ka billowday magaalada Kismaayo
Isku dhacyada Mandhera oo saameyn ku yeeshay is dhexgalka bulshada
Afar qof oo ku dhintay duqaymo Muqdisho xalay ka dhacay
Qaramada midoobay oo cambaaraysay qaraxii Muqdisho iyo weriye kale oo saaka la diley
Jidgooyooyin laga cabanayo
Dhadhaab: Maydad laga helay duleedka xerada Ifo
Madfac gaari ku habsaday deegaanka Leego oo sababay dhimasho.
Xaaladda xaafadda Islii oo deggan
Xiisad beeleed ay ku dhinteen inkabadan 30 qof Dadka degmada Afmadow oo ka soo kabanaya dagaallada
Wariye Cabdicasiis Koronto oo loo haysto inuu wareystay haweeney la kufsaday
Qaramada midoobay oo ballarineysa hawlaheeda miino-baarista Soomaaliya
Sheekada fanaanad miino curyaamisay, qoyskeediina dishey
Saameynta uu qaraxii Muqdisho ku yeeshay dadka rayadka ah.
Khatarta miinooyinka Galdogob
Jidgooyooyinka ee waddada isku xirta Muqdisho iyo Shabeellada Hoose.